September 2009 - शखदा साहित्य
नारीका प्रतिनिधिमुलक भोगाइहरु
4:31 AM समालोचना
विगत केही समयदेखि नेपाली साहित्यमा बाल-उपन्यास लेखन केही सशक्तताका साथ देखापरेको पाइन्छ । यसै शृङ्खलामा बालसहित्यकार एवम् कथाकार शर्मिला खड्का (दाहाल) बालउपन्यास लेखनका क्षेत्रमा केही नवीन प्रस्तुति र विषयका साथ देखापरेकी छिन् । प्रौढकथा लेखनमा समेत नवीन सचेतताका साथ देखापरेकी शर्मिलाका फुटकर रूपमा प्रकाशित प्रौढकथाहरूले उनको बेग्लै र पृथक पहिचानलाई सङ्केत गर्दै विशिष्ट कथाकारका रूपमा उभ्याउने आधार दिएका छन् । पुस्तककार रूपमा 'सानी' ( २०६० ) र 'सानी को सहास' (२०६२ ) एवम् 'मित्रताको महत्व' (२०६३ ),सिन्केको सफलता (२०६४) बाल उपन्यासले उनलाई विशिष्ट बालउपन्यासकारका रूपमा उभ्याएको देखिन्छ । साझा बालसाहित्य पुरस्कार ( २०६० ) र नेपाल बालसाहित्य समाजको राष्ट्रिय सम्मेलनमा सम्मानित शर्मिलाको 'सानीको साहस' उत्कृष्ट बालउपन्यास हो । 'सानी'ले साझा बालसाहित्य पुरस्कारजस्तो गरिमामय पुरस्कार प्राप्त गरेको छ भने 'सानीको साहस'ले अन्तर्राष्टिय नेपाली साहित्य समाजको सर्वोत्कृष्ट नारी हस्ताक्षर पुरस्कार प्राप्त गरेको छ ।
'सानीको साहस' पूर्णातया बालमनोरचना अनुरूप लेखिएको छ । यस कृतिका साथै अन्य उनका बालसाहित्यिक रचनाका केन्द्रीयतामा र शर्मिलाका बालसाहित्यिक रचना/बालउपन्यासका सेरोफेरोमा पाइने प्रमुख प्रवृत्तिगत विशेषता यसप्रकार देखिन्छन् :
बालमनोरचना र बालमनोविज्ञान अनुरूप रचना गर्ने प्रवृति ,
बालउपन्यासलाई रोचक र औत्सुक्यमय बनाउन लोक कथात्मक ढाचाँ र शैली को प्रयोग ,
खप्रतीकीकरण, सन्देशमूलक प्रवृत्ति र आदर्शोन्मुख यथार्थको प्रस्तुति ,
ख बालबालिकालाई साहसी, निडर आदर्श बनाउने दृष्टान्तहरूको प्रयोग,
ख बालबालिकाले देखेभोगेकै युगीन सामाजिक यथार्थ समेतको प्रस्तुति ,
ख बालबालिकाको स्तरअनुरूपको भाषा शैलीको प्रयोग र कुतूहलता, रोचकता र सरस एवम् सरल शैलीको प्रयोग आदि ।
साहित्यकार शर्मिलाको 'सानीको साहस' बालमनोरचना अनुरूप लेखिएको बालउपन्यास हो र यसलाई 'सानी' बालउन्यासकै दोस्रो भागका रूपमा रचना गरिएको छ । प्रमुख पात्र 'सानी'कै वृत्त वरिपरि यी दुवै उपन्यास अगाडि बढेकाले यो सानी कै निरन्तरता हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
'सानीको साहस' एउटै मुल बालउपन्यास भए पनि यो विभिन्न छब्बीस ओटा शीर्षकहरूमा विभाजित छ र यसबाट यो उपन्यास एकातिर सानासाना कथा लघुकथाहरूको सङ्ग्रहका रूपमा देखिन्छ भने अर्कातिर विभिन्न शीर्षकहरूमा विभाजित उपन्यासका रूपमा पनि देखापर्छ । ती शीर्षकभित्रका कथानक स्वंयमा पूर्णता भएर पनि ती परस्पर सम्बध्द छन् । असम्पृक्त छन् र सापेक्षित पनि छन् । त्यसकारण यस बालउपन्यासले बालबालिकाहरूलाई उपन्यास, कथा र लघुकथा सबैको स्वाद दिन्छ । विषयवस्तु वा अर्न्तर्वस्तुको संयोजनका दृष्टिले 'सानीको साहस' भित्र निम्नलिखित अर्न्तवस्तु देखिन्छ ः
सामाजिक पारिवारिक घटना सर्न्दर्भ ,
युगीन यथार्थ परिवेश र वर्तमानको भोगाई ,
वैयक्तिक बालमनोरचना र मानवीयशक्ति ,
संघर्षपूर्ण जीवनकथाको दन्त्यकथात्मक यथार्थ ,
शौर्य , साहस , पराक्रम र शक्तिजस्ता सकारात्मक भाव र चिन्तन ।
यी अर्न्तवस्तुका सर्न्दर्भमा 'सानीको साहस' बालउपन्यास भित्रका केन्द्रीय कथ्य र अर्न्तर्वस्तुलाई यसप्रकार देखाइन्छ :
क्र.स. शीर्षक केन्द्रींय कथ्य/ वस्तुसर्न्दर्भ
१ रात्रि बसको यात्रा बस रोकेर लुटपाट गर्ने युगीन यथार्थको प्रस्तुति ।
२ जूनको देशमा भ्रमण साहसी चरित्रको पूर्वाभास र अधिकल्पनाको प्रयोग ।
३ सानीको बिमारी सहरिया सडक बालबालिकाको विसङ्गत जीवन
४ विद्यालयमा भर्ना सहरियाभन्दा ग्रामीण विद्यालयमा बालबालिकाहरूले बढी माया पाएको प्रस्तुति ।
५ चिडिया खानाको भ्रमण पशुपङ्क्षीप्रतिको नैर्सर्गिक प्रेंम
६ चम्पासँग भेट सहरिया युवायुवतीका फेसन र बालश्रमशोषण
७ जन्मदिनको घटना सामान्य घटनाबाट पनि बालमनोविज्ञानमा पर्ने प्रभावको प्रस्तुति ।
८ मन्त्रको करामत बालमनोविज्ञानका सर्न्दर्भमा शान्ति र अशान्तिको प्रभावपूर्व प्रतीकात्मक प्रस्तुति ।
९ मम्मीको व्यवहार परिवारबाट अपमानित हुनुको बालपीडा बोध ।
१० सानी र नेपाली विषय नेपाली विषयप्रति अनुराग र लोकसाहित्यिक प्रभाव
११ दसैंको रमझमर् पर्वको उत्साहमा बालमनोविज्ञानको प्रभाव ।
१२ हजुरआमास“ग भेट ग्राम्य प्राकृतिक परिवेशमा आत्मीयताको अनुभुति ।
१३ रहस्यमय कुरा शान्तिमाता र अशान्तिमाताको प्रतीकविधाद्धारा अलौकिक दैवीशक्तिको मनोवैज्ञानिक रहस्योद्घाटन
१४ हजुरआमाको निधन सामान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव
१५ अभिभावक दिवस र् इष्यात्मक द्धन्द्ध र बालमनोवैज्ञानिक प्रभाव ।
१६ भाइको जन्म बालमनोविज्ञानको सघन प्रस्तुति
१७ बाबाको सरुवा आञ्चलिकता र ग्राम्य परिवेशको प्रस्तुति
१८ छाउपडी प्रथा आञ्चालिक र कुसंस्कारग्रस्त समाजको चित्रण
१९ अचम्मको घटना कुप्रथा र कसंस्कार हटाउनु पर्ने चेतनामुलक दृष्टिकोण
२० बाघमुखे बाबासँगको भेट लोककथात्मक शैलीमा पूर्वर्जन्म आदिको प्रसङ्ग र उपकारी चिन्तनका साथ अलौकिक शक्तिको पहिचान
२१ बूढीमान्छेको उध्दार उपकारी चरित्रकी सानीका रहस्यमय शक्ति र प्रच्छन्नताको अभिव्यक्ति ।
२२ गुरूपूणिर्माको मेला प्रतीकात्मक रूपमा ज्ञानविज्ञानको समन्वयको भाव, ब्रहृमाण्ड चित्रण र अद्भुत तन्त्रविद्याका माध्यमबाट अलैकिक शक्तिको प्रस्तुति
२३ बाबाको अपहरण नेपालको वर्तमान यथार्थको अभिव्यक्ति र अपहरण आदिको समसामयिक सर्न्दर्भ ।
२४ बाबाको खोजीमा माओवादी जनयुद्धको प्रभावजन्य सर्न्दर्भ र युगीन यथार्थको प्रस्तुति ।
२५ सानीको अपूर्व सफलता प्रतीकात्मक रूपमा माओवादी र सरकार मिल्नुपर्छ भन्ने मेलमिलापको सन्देश ।
२६ बाबाको आगमन संयोगान्त र सकारात्मक प्रभावमा बाल मनोविज्ञानको सकारात्मक सोच ।
शर्मिला बालमनोविज्ञान र बालमनोरचनालाई राम्ररी छामेर बालउपन्यास लेख्न सिपालु छिन् भन्ने कुरा उनको यस उपन्यासमा व्यवस्थापन गरिएको शीर्षकहरूको विधानले पनि स्पष्ट पार्छ । यस्तो शीर्षकविधानले उपन्यास पढ्ने लामो पट्यारलाग्दो समयलाई छोट्याइ दिन्छ र कथाको पठनमा उपन्यास पढ्ने कला सिकाउ“छ । बालउपन्यासमा यस्तो शीर्षकविधान आवश्यक पनि हुन्छ र यसले बालबालिकामा उत्सुकताको समेत सिर्जना गर्छ ।
बालसाहित्यिक रचनामा यथार्थ र कल्पनाको सन्तुलित संयोजन हुनर्पर्छ । यथार्थ मात्र रह“दा बालमस्तिष्कले त्यसलाई पचाउन सक्दैन भने कल्पनामात्र राख्दा त्यो अतिरञ्जनाप भई बालमस्तिष्कमा भ्रम र अवैज्ञानिकताको सिर्जना हुन्छ । त्यसैले यी दुईको सन्तुलित संयोजन गर्न शर्मिला सिपालु छिन् । त्यति मात्र होइन , रहस्यमयता ,तिलस्मी घटनाको संयोजन र अलैकिकताको प्रयोगले उपन्यास लाई रोचक बनाउँछ । बालसाहित्यिक रचनामा रोचकता अपरिहार्य तत्व हो । रोचकता भइदियो भने बालबालिकामा कल्पनाशक्तिको विकास हुन्छ । शर्मिलाले यस कुरालाई अत्यन्त राम्ररी ध्यान दिएकी छिन् ।
यस बालउपन्यासको अर्को सशक्त पक्ष के हो भने बालउपन्यासको शीर्षक'सानीको साहस'ले बालबालिकालाई साहसी , निर्भीक र परिस्थितिस“ग जुध्नसक्ने खालको बनाउन प्रशस्त मनोवैज्ञानिक आधारहरू दिएको छ । यहा“ प्रयोग गरिएका शान्तिमाता र अशान्तिमाता हाम्रो परिवेशका प्रतीक पात्र हुन् र हामीभित्रकै असल र खराब प्रवृत्ति पनि हुन् । यसबाट वर्तमानबोधको अभिव्यक्ति पनि हुन्छ । अझ 'रहस्यमय कुरा' शीर्षकभित्रको अर्न्तर्वस्तुको प्रभावपूर्ण संयोजन विशिष्ट र कलात्मक छ । यसबाट दन्त्यकथाको कुशल संयोजनले यस बालउपन्यासलाई तिलस्मी पनि बनाएको छ भने ठाउँ-ठाउँमा प्रयोग गरिएका आद्भुतिक बिम्ब ले यस कृतिलाई रहस्यमय र चिन्तनपरक बनाएका छन् । यस्तो संयोजनबाट बालबालिकामा बौध्दिकशक्तिको विकास हुन्छ । प्रतीक पात्रका रूपमा आएका शान्तिमाता र अशान्तिमाता दोहोरो प्रतीकात्मक अर्थ दिन पनि र्समर्थ छन् । यी पात्रएकातिर हाम्रो परिवेशकै र हामीभित्रका मनोवृत्तिकै प्रतीक पात्र हुन् भने अर्कातिर शान्तिमातालाई सानीकी स्वर्गीय आमाको प्रतीक पात्रका रूपमा र अशान्तिमातालाई केही रूपमा सानीकी हजुरआमाको प्रतीकका रूपमा पनि मान्न सकिन्छ ।
मनोविज्ञानको प्रयोग पनि यस बालउपन्यासको सशक्त पक्ष हो । 'सानी' र 'मित्रताको महत्व' का तुलनामा 'सानीको साहस' मा बालमनोविज्ञानको प्रयोग केही न्यून भए पनि त्यो प्रभावपर्ूण्ा छ । यस दृष्टिले 'जन्मदिनको घटना', 'मन्त्रको करामत', 'रहस्यमय कुरा', 'हजुरआमाको निधन', 'अभिभावक दिवस', 'भाईको जन्म' शर्ीष्ाकहरू बढी उल्लेखनीय देखिन्छन् । 'रहस्यमय कुरा' मा सानीलाई चिठी अझै नसकिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्नुमा मनोविज्ञानको गुढ दृष्टिकोण छ । यस्ता मनोवैज्ञानिक सर्न्दर्भ उपन्यासभरि प्रशस्त देख्न सकिन्छ तर तिनलाई सामान्य रूपमा भेटाउन सकि“दैन । बालसाहित्यिक रचनामा आवश्यक पर्ने एउटा महत्वपर्ूण्ा अर्न्तर्वस्तु नैतिक आदर्शवादी चेतना हो र यसबाट उनीहरूको चरित्रनिर्माणमा थप बल पुग्दछ । यस दृष्टिले शर्मिलाको 'सानीको साहस' मा चरित्र निर्माणका लागि बालबालिकालाई प्रशस्त खुराक दिएको छ । आजका हाम्रा बालबालिकाले सानीको चरित्रलाई अनुकरण र अनुसरण गर्न सके वास्तवमा तिनले भविष्यमा जीवनको रहस्य बुझ्न सक्छन् ।
'सानीको साहस' बालउपन्यासकी केन्द्रीय पात्र वा नायिका सानी हो र यो सानीकै चरित्र वरपर घुमेको छ । एउटी सानी बालपात्र सानीमा देखापरेका चारित्रिक विशेषताहरू अत्यन्त प्रेरणास्पद छन् । यसबाट बालबालिकामा कठिन सङ्र्घष्ाका बीचमा पनि बा“च्न सिक्नुपर्छ भन्ने सन्देश जान्छ । त्यति मात्र होइन यहा“ शर्मिलाले कुनै बालक -पुरुष) पात्रलाई प्रमुख पात्र नबनाएर बालिका -नारी) पात्रलाई प्रमुख पात्रका रूपमा उभ्याइएकी छिन् । यसले हाम्रो समाजमा पुरुषले भन्दा नारीले सङघर्षपूर्ण जीवन बाँच्नु पर्छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गरी नारीभित्र एउटा विशिष्ट शक्ति हुन्छ र त्यस शक्तिलाई उसले चिन्नसकेमा ऊ विशिष्ट हुन्छे भन्ने कुरा पनि यहाँ देखाइएको छ । यस बालउपन्यासका कतिपय घटनावलीहरू स्वयम् लेखिकाकै जीवनका प्रतिकृति हुन् कि जस्ता पनि देखिन्छिन र यसबाट नारीका प्रतिनिधिमुलक भोगाइको प्रस्तुति पनि अभिव्यञ्जित हुन्छ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा शर्मिला खड्काको 'सानीको साहस' बालसाहित्यको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो । विषयवस्तुको चयन र भाषाशैलीको प्रयोगमा बालमनोरचनालाई ख्याल गरेर लेखिएको हुदाँ उपन्यास बालमनोमस्तिष्कले सहजै ग्रंहण गर्न सक्ने बनेको छ । यस्ता बालउपन्यास लेखनमा शर्मिला अझै यथार्थको नजिक पुग्न सक्नु पर्छ । 'सानी' र 'सानीको साहस' हुँदै अब अरूअरू शृङ्खलाबध्द बालसाहित्य लेखनमा शर्मिलाले थालेको यो एककिसिमको नवआयाम पनि हो । उनको लेखनमा यस्तै नवआयामका झिल्काहरू यत्रतत्र प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
4:26 AM समीक्षा
साहित्यका विविध विधामध्ये लोकप्रिय र शक्तिशाली विधाका रुपमा आख्यानलाई लिन सकिन्छ । नेपाली साहित्यमा यस विधामा नयाँनयाँ कतिको प्रवेश जारी छ । यही मेसोमा मोफसल (इटहरी) मा सिर्जनारत शर्मिला खडका (दाहाल) का दुइ दर्जन कथाको सङ्ग्रह समयको क्यानभासमा सार्वजनिक भएको छ । पाँच वर्षयता लेखिएका र गरिमा मधुपर्क शारदा नेपाल समय लगायतका पत्रिकामा छापिएका यस सङ्गालोका कथाले वतर्मान समाजका आरोह अवरोहका साथै नारी मनका अतप्त अनुभूतिको उजागर गरेका छन् । वेवक्याम्पको आकतिविहिन पुरुष, समयको क्यानभासमा, ओ अपराजिता, सुकन्या उर्फ निलिमा, फूल अथार्त सुन्तली , लगायतका कथा अतप्त अनुभूतिका कथा हुन् ।
पुस्तकका सबै कथाले आघुनिक चेतनाको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । धेरैजसो कथामा विषयवस्तु, घटना र चरित्रमा विविधता हुदाहुदै केहिमा कथाकार पात्र र अनुभूति दोहोरिएका छन् । कुनै कुनै कथा कथाकारका नितान्त निजी अनुभवका मनोवादजस्ता लाग्छन् । सलल बग्ने प्रवाह भने कथाहरुको सवल पक्षका रुपमा छ ।
मध्यम र निम्न मध्यम वर्गको सामाजिक समस्या, गरिबि र पीडा, प्रेम र यौनजीवन, घातप्रतिघात, सङ्घर्ष र सफलता शर्मिलाका कथाका केन्दिय विषयवस्तु हुन् । पिछडिएको र अपहेलितदेखि अत्याघुनिक सुविधासम्पन्न पात्रले नेपालीसमाजको विविधताको प्रतिनित्व गरेका छन् ।
सामाजिक परिवेशसँगै पात्रका जीवनमा जेलिएका फरकफरक समस्याले कथा सुस्वादु र रोमान्चक बनेका छन् ।
अन्नत,कान्तिपुर दैनिक 2066.2.16
सम्झन लायकका क्षणहरु
1:57 AM फोटो
१.कथासंग्रह समयको क्यानभासमा वरिष्ठ समालोचक डा. गोविन्दराज भट्टर्राई द्वारा विमोचन गर्दाको क्षण ।
२. पहिलोपुस्तक सानीको कवि अनिल पौडेलद्वारा विमोचन गर्दाको क्षण ।
३. सहित्यिक कार्यक्रममा साथमा डा. गोविन्दराज भट्टर्राई तथा आर.एम डंगोलसँग ।
४. सानीले साझा बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त गर्दाको क्षण ।
५. सानीको साहसले अर्न्तराष्टिय नेपाली साहित्य समाजको सर्वोत्कृष्ट नारी हस्ताक्षार प्राप्त गर्दाको क्षण ।
जुडासे प्रवृत्ति -१
12:52 AM संस्मरण
बालकमा जालझेल, कपट, बेइमान केही हुँदैन । बालकको स्वभावले वाल्यावस्थामा उसको रूपर इश्वरको रूपजस्तै हुन्छ । तर ऊ जब बढ्दै जान्छ तब समाजका विभिन्न परिस्थिति, विसंगति आचार व्यवहारले ऊ खराब व्यक्तिको रूपमा बदलिन्छ । हामी यस कुरालाई कथा मार्फ बुझ्न सक्छौँ । महान चित्रकार लियोनार्दो दा भिन्ची द्वारा मिलान भन्ने नगरको एउटा गिर्जाघरका भित्तामा जिजस क्राइष्टलाई मृत्युदण्ड दिनुभन्दा अघिल्लो रात आफ्ना प्रिय चेलाहरूसित बसेर भोज खाएको चित्र बनाइएको छ । अन्तिम रात्रिभोज नाम दिइएको त्यो चित्र विश्व प्रसिद्ध छ । त्यससमय भिन्चीले एउटा बालकको अनुहार हेर्दै क्राइष्टको चित्र बनाएका थिए । अरू विभिन्न मानिसहरूलाई आलोपालो गरेर गिर्जाघरका नजिक उभिन लगाएर उनीहरूका अनुहारको तस्वीर त्यहाँ उतारेका थिए । भिन्चीले क्राइष्ट र उनका अरू चेलाहरूको अनुहारको चित्र त बनाए तर जुडास भन्ने चेलाको अनुहार बनाउन सकेनन् । जुडास ज्यादै नीच व्यक्ति थियो । ऊ लोभी र पापी थियो । उसले केही चाँदीका सिक्का पाउने लोभमा परेर लुकेर बसेका आफ्ना धर्मगुरुलाई देखाइदिएको थियो । भिन्चीको कलाकारितामा मनको भाव मुखमा झल्कनु पर्दथ्यो । त्यसैले जुडासको अनुहार उनले कही भेट्टाउन सकेनन् । उनले धेरै जेलमा गएर अपराधीहरूको अनुहार हेरे तर उनले आफ्नो कल्पनाको जुडाससँग मिल्दोजुल्दो अनुहार फेला पार्न सकेनन् । अनुहार भिल्दो जुडास फेला पार्न नसक्दा झण्डै धेरै वर्षम्म त्यो महान चित्र अघुरो रह्यो ।
धेरैवर्षछि सडकमा हिँड्दाहिँड्दै एकजना मान्छेसित भिन्चीको जम्काभेट भयो । त्यस व्यक्तिको अनुहार उनले धेरैवर्षेखि खोजेको जुडासको अनुहारसित काटिकुटी मिल्दोजुल्दो थियो । त्यस व्यक्तिलाई भिन्चीले गिर्जाघरसम्म जान अनुरोभ गरे । भिन्चीको अनुरोधलाई त्यस व्यक्तिले अस्वीकार गर्न सकेन । भिन्चीले त्यही व्यक्तिको अनुहार हेरेर अपूर्ण रहेको अन्तिम रात्रिभोजको जुडासको अनुहारको चित्रलाई पूरा गरे । चित्र पूराभएपछि जुडास बनेको व्यक्ति गम्भीर बन्यो । केहीबेरपछि ऊ धुक्कधुक्क गर्दै रोयो । कारणसोध्दा उसले भन्यो ऊ सानो बालक हुँदा उसैलाई त्यस गिर्जाघरका भित्ताका छेउमा बस्न लगाएर जिजस क्राइष्टको अनुहारको चित्र भिन्चीले बनाएका रहेछन् । उसले् आँसु चुहाउँदै भन्यो म सानो छँदा जिजस क्राइष्ट रहेछु अहिले जुडास भएछु । मैले आफ्ना सबै नराम्रा काम छो्डनु पर्छ अब मैले सुध्रिनु पर्दछ ।
कतै हामी पनि यसै कथाका बालकमा जिजस बनेका व्यक्तिझैँ जुडास बनेका त छैनौँ । जन्मदा हामी सबै जिजस बनेर जन्मेका हुँदा रहेछौ तर उमेरसँगै हामी नराम्रा विचार, आचार र अहम् मा लागेर जुडास बनिरहेका हुन्छौ । हामी आफैलाई थाहा हुँदैन । मानिस जुडास बन्ने आधारहरू हामीसँग प्रशस्त छन् । हामीले यसबाट जोगिएर हिँड्न सके मात्र जिजसबन्न सक्छौँ । मसँग बालकसम्बन्धी यस्ता केही घटनाहरू छन् । जुन घटनालाई जुडासे प्रवृत्तिले सङ्क्रमित गरेको छ । मैले अध्यापन गराउन थालेको त्यस्तै चारपाच वर्षभएको हुँदो हो - एउटा स्कुलमा । म विषय शिक्षिका रूपमा तेस्रो घण्टीमा तीन कक्षामा जानु पर्दथ्यो । जब म कक्षामा प्रवेश गरे त्यहाँका विद्यार्थीअघि देखि नै उभिरहेका थिए । मैले 'बस' भने, पटक्कै मानेनन् । पहिलो घण्टीमा गएका सरले उनीहरूले पढेनन् भनेर दिइएको सजाय रहेछ । उनीहरूले पहिलो घण्टी उभिएर नै पढेछन् । दोस्रो घण्टीमा एकजना मीस जानुभएछ । उनीहरूले सरले बसे कडा सजाय दिन्छु भन्नुभएको छ भनेर बस्न मानेनछन् । उक्त मीसले नबसाई पढाउनु भएछ । दोस्रो घण्टी बितेपछि ब्रेक हुन्थ्यो । त्यो बेलामा पनि उनीहरू पानी खान र दिशापिसाब गर्न जान्थे त्यो पनि डरले कोही गएनछन् । तेस्रो घण्टीमा म पस्दा सबैजना रुन खोजेर सरले हामीलाई यो सजाय दिनुभएको भन्दै बिलौना सुनाए । मेरो बालबालिकाप्रतिको कोमल हृदय नराम्ररी दुख्यो । मैले कति 'बस' भन्दा पनि ती अवोध बालबालिका पटक्कै बस्न मानेनन । मैले प्रिन्सिपलको गई भन्ने विचार गरे । म दोस्रो घण्टीको शिक्षिकाझैँ कठोर हुनसकिनँ । प्रिन्सिपलको कोठामा छिर्न मात्र के आँटेकी थिए फेरि सोचेँ यो सानोतिनो झमेला के प्रिन्सिपललाई भनिहाल्नु । त्यसैले पहिला भाइसप्रिन्सिपललाई भन्न गएं । उहाँले अत्तालिदै भन्नुभयो 'यस्तो सजाय दिनुहुन्न ।' कक्षामा आइ सबैलाई बस्न लगाउनु भयो । त्यसको जिम्मा म लिन्छु भन्नुभयो । त्यसपछि मैले सबैलाई पहिला बाहिर जान दिएँ र कक्षा लिएँ । त्यसपछि खाजा खाने समय भयो । क्यान्टिनमा सबै भेला भयौँ । उक्त सजाय दिने सर मसँग बाझुलाझैँ गरेर बुरुक्कबुरुक्क उफ्रिनुभयो । मैले भाइस प्रिन्सिपललाई भनेर गरेकोभन्दा पनि जुडासे प्रवृत्ति देखाउनुभयो । त्यहाँ भाइसप्रिन्सिपलको पनि उपस्थिति थियो । तर उहाँ केही बोल्न सक्नुभएन । उहाले छेपारोले झैँ रङ्ग बदल्नुभयो । एक शब्द बोल्न सक्नुभएन । उहाँको गजर्नयुक्त बोलीले हामी शिक्षिकाहरू त्यसै नर्भस भयौँ । तर पुरुष साथीहरू आफूलाई बौद्धिक मान्नेहरू पनि प्रशस्त थिए त्यहाँ । उनीहरू पनि बोलेनन । पुरुषहरू आफ्नो जातको गलत कार्यलाई पनि कसरी मौन र्समर्थन गर्न सक्दा रहेछन् यो साक्षात प्रमाण थियो । यदि त्यो ठाउँमा महिला भएको भए नङ्ग्याएर छोड्न पनि बाकी राख्दैनथे होलान् । मभित्र कट्टर नारीवादी भावना मौलायो । मेरो हृदयमा कहिले निको नहुने चोट लाग्यो । साथीको भलो सोच्दा आफ्नै कुभलो हुन्छ भनेको यही रहेछ भन्ने सोचेँ र अघि प्रिन्सिपललाई नभनेकोमा पछुतो माने अहिले म सोच्दै छु पक्कै पनि जुडासे प्रवृत्ति देखाएका ती सरले सुध्रनै पर्दछ ।
यस्ता जुडासे प्रवृत्ति हामीले जानेर वा नजानेर पनि गरेका हुन्छौँ । तर हामीले हाम्रो गलत व्यवहारको आत्मालोचनाचाहिँ गर्नै पर्छ । अरूको सातो खाएर आफ्नोजुडासे प्रवृत्तिलाई मलजल गर्नचाहिँ हुँदैन । यस्ता जुडासे प्रवृत्ति मैले त्यसठाउँको जागिरे अवस्थामा धेरै भोग्ने अवसर पाएँ तर पनि मैले सत्यको पक्ष लिन कहिले छोडिनँ । जुडासे प्रवृत्तिमा मान्छे जानअनजानमा पनि पर्दोरहेछ । मैले पनि त्यही स्कुलमा एउटा जुडासे प्रवृत्ति देखाएको छु । जुन प्रवृत्तिले मलाई धेरै समयसम्म आत्माग्लानी गराइरर्यो । साना कक्षामा खाजा चोरेर खाने प्रवृत्ति धेरै हुन्छ । त्यसमाथि त्यो स्कुलमा यो समस्या अझ गाहिरो गरी गाडिएको थियो । त्यसलाई उखेल्न मुश्किल परिरहेको थियो हामीसबैलाई । म केजी कक्षामा पढाउथेँ । एकपल्ट के भयो भने एउटी बच्चीले खाजा चोरेर खाएको सबुत प्रमाण भेटियो । अब यस्तो कार्यलाई निरुत्साही पार्न मैले त्यसकेटीलाई खेल मार्फ 'म चोर हुँ' भनेर अगाडि कागज मा लेखेर टाँसिदिए र उसलाई नर्सरीका भाइबहिनीलाई पनि देखाएँ । यसबाट अरू केटाकेटी डराए र रमाए पनि । तर बाटामा जाँदा अरू साथीहरूले त्यही कुरालिएर जिस्काएछन् । अझ उनको आमालाई पनि भनिदिएछन् । उनकी आमालाई श्रीमानले पनि राम्रो नहेर्ने समाजमा तल्लोस्तरको भएर बाँच्नुपर्ने पीडा रहेछ । उनलाई यो कुराले निकै दुखाएछ र प्रिन्सिपल कहाँ आइभनेछिन् । तर मैले थाहा जुडासे प्रवृत्तिको अवश्य माफी माग्ने थिएँ। यो कुराको चर्चा पछि निकै दिनसम्म भयो । तर मैले त्यही स्कुलमा एउटा इश्वरीय प्रवृत्तिपनि देखाएकी थिएँ तर त्यसको चर्चाको कुरा त परै जाओस् । आफै सुनाउँदा पनि नसुन्ने धेरै भए । कसैले देखाइदिँदा पनि नदेख्ने धेरै भए ।। कुरा त्यसै बेलाको हो । मेरो छोरी केजीमा नै पढ्दथी । ऊ परीक्षामा प्रथम आएकी थिई । कक्षा शिक्षिकामा म र अर्की एकजना थियौँ ।ती मीसले मेरी छोरीलाई ट्युसन पनि पढाइ रहेकी थिई । मेरो छोरीको पर्ढाई नर्सरी देखि नै राम्रो थियो । भनौ प्रथम भएकी थिई । ऊ केजीको अन्तिमपरीक्षामा पनि प्रथम आइ प्रथममात्र हैन पूर्व प्राथमिक तहमा नै बढी नम्वर ल्याउन सफल भई । यसबाट उसले दुईवटा पुरस्कार पाउँथी ।एउटा पूर्व प्राथमिक तहमा प्रथम भएको र अर्को कक्षामा प्रथम भएको । तर आफ्नै कक्षामा आफ्नै छोरीलाई बढी नम्बर दिएर दुइटा पुरस्कार प्राप्त गरेकोमा मैले मुटुभेदन आरोपहरू सहनु पर्दथ्यो । त्यो आरोप सहनुभन्दा बरु मैले आफ्नै छोरीको नम्बर घटाएर दोस्रो स्थान ल्याउन उचित ठाने“ । मेरी छोरीमा साँच्चै योग्यता छ भने भविष्यमा उसले यस्ता पुरस्कार कति पाउछे, पाउछे । वास्तवमा त्यो पाउनु पो गौरव हो अहिले आफ्नै आमाले दिएको के महत्व होस् । यही सोचेर मैले आफ्नै छोरीलाई अन्याय गरे । मैले स्कुलमा काम गर्दा प्रिन्सिपलले आफ्नै छोरीलाई प्रथम पारिदिनु भन्ने अभिव्यक्ति सुनेकी थिएँ । तर मैले त्यो जुडासे प्रवृत्तिको अन्त्य हुनु पर्छ भन्ने संदेश दिनका लागि पनि यसो गरेकी थिएँ । साँच्चै मेरी छोरी पछिपछि विभिन्न प्रतियोगितामा जित्दै स्थानिय तथा क्षेत्रियस्तरमा धेरै पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भई । अहिले मलाई आफ्नो इश्वरीय प्रवृत्ति आफैलाई गर्व लागेको छ । तर मेरो यो इश्वरीय प्रवृत्ति सुनेर र नसुनेझैँ भए धेरैजना देखेर पनि नदेखेजस्तो नहुने धेरै भए किनभने हामी सबैलाई जुडासे प्रवृतिले आक्रन्त पारेको छ ।
त्यही स्कुलमा मेरो अर्को घटना छ । अब सत्यको उजगार हुनै पर्दछ । मैले जीवनमा सत्यको पक्षमा लड्ने कसम खाएकी छु भने पक्कै यो सत्य उद्बोधन गर्नैपर्छ । त्यही स्कुलमा मेरी ठूली छोरीसँग एकजना कर्र्णोलको छोरी पढ्थिन् । स्कुलमा ती कर्सावको छोरीको निकै खातिरदार हुन्थ्यो । अन्य कतिले पढ्न सीट नपाए पनि तिनले ढिलै भए पनि पाए । तिनलाई स्कुलका कुनै नियम कानूनले छुदैन थियो । तिनी कक्षमा नेपाली विषय पढ्दिन थिन् । नेपाली पुस्तक नै ल्याउदिन थिन र परीक्षामा पनि दिन्नथिन् । अन्य विद्यार्थीले नेपाली पुस्तक एकदिन ल्याएनन् भने कडा सजाय पाउँदथे । उनीहरूले दिनभर भोको हुनुपथ्र्यो कि त मधेशको तातो घाममा उभिनु पर्दथ्यो । तर तिनको अभिभावकबाट यस्तो उर्दी भएको हुनाले यो पालना भएको थियो । सरकारी कर्मचारी मान्छे नेपाली जनताको पसिनाले बाँचेको मान्छेले नेपाली भाषालाई अपहेलना गरको देखेर मभित्रको राष्ट्रिता रुन खोज्दथ्यो । म सोच्दथेँ मेरो जीवनको कुनै कालखण्डमा यो सत्य अवश्यै उजगार गर्नेछु । अझ कर्सावनी निकै ठूलो थियो । उनकी छोरी मेरी छोरीकी साथी थिइन् । उनी मायालु र आज्ञाकारी थिइन् । उनी मेरो घरमा खेल्न आउने गर्थिन । स्कुलबाट र्फकदा कहिलेकाहीँ गाडी नभएको बेला उनलाई म रिक्सामा मेरो खुट्टानेर मेरी छोरीहरूसगै राखेर ल्याउने गर्दथे । एकपल्ट उनी आफै छोरी लिन स्कुल आएकी थिइन् हामीलाई उनको गाडीमा चढ्ने संयोग मिल्यो । गाडीमा उनी उनको आफन्तसँग अङ्गेजी मात्र बोलिन । सायद उनलाई नेपाली बोल्न पर्दा आफ्नो गौरव घटेझैँ लाग्दथ्यो क्यारे । वास्तवमा राणाशासकहरूले दरवारमा अङ्ग्रेजी मात्र बोल्ने एउटा राम्रो परम्परा छोडेर गएका थिए । त्यसको प्रभाव त पर्ने भइहाल्यो । यसरी नेपाली भाषाको अपमान भएको देख्दा मन काटिन्थ्यो । जुडासे प्रवृत्तिमा नाची, खाई, खेली गरेर हुर्केका शाहीशासन आयु यति छिटो होला भन्ने त्यसबेला कसले सोचेको थियो होला र ?
समय परिवर्तनशील छ । हामी सबैले ढिलोछिटो आफ्नो जुडासे प्रवृत्ति त्याग्नै पर्छ । अनि मात्र हामी सबैको भलो हुन्छ । नत्र भए २०८ वर्षटिकेको नेपालको शाहवंश जस्तो ह विगत हाम्रो पनि हुन्छ सक्छ । जुडासेप्रवति भनेको हामीभित्र नै भएका नराम्रा वा कुभावानाहरु हुन् । यी सबै कुभावाना त्यागेर हामीले राष्टियहित समाजपर्ति र्समपित हुनै पर्छ । नजिकै आएको महान पर्व दसैलाई पनि यिनै कुभावनाप्रति विजय पाउने उत्सवको रुपमा मनाऔ । यस महान पर्वमा सबै मानवतामा मेलमिलाप , सहिष्णुता समृद्धि र शान्ति छाओस् ।
यो मन, मन नै हो
10:55 PM कविता, पद्य
यो मन मन नै हो, त्यसैत्यसै चर्किएर फुट्न खोज्छ
विश्वासमाथि विश्वासघात गर्नेहरु देखि
कुडिएर यो मन त्यसै टुट्न खोज्छ
जताजतै रुखो जमिन छ, फल नलाग्दै बोट मर्न खोज्छ
रसायनिक मलले थेग्न सक्दैन यो मनलाई
कुहिएर फल नपाक्तै र्झन खोज्छ
वारिपारि जोड्ने केवुलकार, तार हुँदाहुँदै अलग्गिन खोज्छ
लोडसेडिगको मारमा विरक्तिएको यो मन
विजुली आउँदा पनि चिम निभ्न खोज्छ
सपना रोप्ने यो मन, विना सहारा लडखडाउन खोज्छ
हजारौ आकांक्षाको विपना फुलाउने यो मनलाई
किन हो आकाशले पनि थिच्न खोज्छ
सुनामीमा भौतारिएको यो मन, हावा आउँदा पनि बतासिन खोज्छ
मनले मनसँग व्यापार गर्ने व्यापारीदेखि
यो मन आर्थिकमन्दीको अभावमा तडपन खोज्छ
यो मन मन नै हो त्यसैत्यसै टुक्रिएर र्झन खोज्छ
मनको परिभाषालाई कुण्ठित पार्नेहरुदेखि
नबल्दै आस्थाको दियो निभ्न खोज्छ ।
भरे साँझ देउराली आइराख्नु है
10:47 PM कविता, पद्य
भरे साझ देउरालीमा आइराख्नु है
मनको त्यो गाठो खोली राख्नु है
उडीजाने यो मन समाइ राख्नु है
मायाको एउटा चिनो छोडी राख्नु है
फूल फुले बेशीमा झरिराख्नु है
एउटा फूल मायाको रोपी राख्नु है
साँचो माया पिरतिको थाति राखेर
मनको त्यो मझेरीमा माझी राख्नु है
सुसाए सल्लाहरू सल्लेरी वनको
मायाको त्यो सुगन्ध छरिराख्नु है
आउने जाने बटुवालाई साक्षी राखेर
अमर कथा प्रेमको सुनाइ राख्नु र्है
3:39 AM कथा
कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू- मैले पहिले भनिसकेको छु , म पात्रको कथालाई उनीहरूको शब्दमा मात्र ब्यक्त गर्नसक्छु भनेर । त्यसैले अहिले म पात्रहरूको अर्न्तव्यथाको कथा लेखिरहेको छु । कुरा के छ भने, मेरा कथाका पात्रहरूसँग मेरो सम्बन्ध बिग्रिदै गएको छ भनौँ चिसिदै गएको छ । यसरी सम्बन्ध ब्रि्रेको निकै दिन भइसक्यो अब उनीहरू आन्दोलन गर्ने, सङ्धर्षमा उत्रने धम्की दिइरहेका छन् । किनभने अहिले मुलुक नै आन्दोलन र सङ्धर्ष सङ्क्रमणले ल्कान्त छ । प्लेग रो गसरह फैलिएको यो सङ्क्रमणले सबै वर्ग, समुदाय, जात र प्रान्तलाई यसले ग्रस्त बनाएको छ भने मेरा पात्रहरू चाहिँ किन नउत्रिउन र आन्दोलनमा होइन र - मेरा पात्रहरूसँग मेरो सम्बन्ध किन कसरी बिग्रियो भन्नुपर्दा कारणहरू धेरै छन् । मैले उनीहरूको वास्तविक कथा लेखिन रे । उनीहरूको भावअनुसारको शिल्प र शैली दिन सकिनँ रे । उनीहरूलाई जीवन्त बनाउन सकिनँ रे । मैले माया र प्रेमको कथा मात्र लेखिदिए रे । विद्रोही पात्रहरूको कथा लेखिदिइन रे । त्यसैले अहिले म मेरो कथाको क्यानभासमा तिनै विद्रोही पात्रको चरित्र चित्रण गर्न गइरहेको छु । मेरो यस विद्रोहको क्यानभासमा तिनै विद्रोही र असन्तुष्टी पात्रहरूका विरोधात्मक छायाहरू छन् । त्यसैले उनीहरू कहिले भोक हडताल, कहिले नाकाबन्दी, त कहिले आमहडताल, त कहिले चक्काजामका आव्हान लिएर सङ्धर्षा उत्रेका छन् । म इमानदारकासाथ भन्छु कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू- उनीहरूको कथन धेरै हदसम्म सत्य छ । तर यसमा मेरोमात्र दोष छैन । म पनि विवश वर बाध्य छु । यस आरोपलाई म यसरी स्पष्टीकरण दिन चाहन्छु । म एक गृहणी , आमा र कर्मचारी पनि हुँ । मैले सम्पर्ूण्ा दायित्व पूरा गरेर साहित्यमा लाग्नर्ुपर्छ । फेरि म आफैमा बौद्धिकता नहुन सक्छ अथवा भाषिक गहनता मैले दिन नसेकेको हुनसक्छ । अर्को कुरा लेखकीय उष्णतामा मेरो कथाको तापक्रम शून्यमा झरेको हुनसक्छ । सफल कथाकारहरू जस्तै तपाईँहरूको जस्तो स्तरीय समकालीन कथा लेख्न नसकेर मेरो कथा धेरैपल्ट प्रकाशकीय मारमा थिल्थिएको हुनसक्छ । मेरा यिनै बाध्यता र विवशताले गर्दा मेरा पात्रहरू मदेखि रुष्ट भएका हुन् ।
कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू- अहिले मेरो एउटी केटीपात्रसँग समञ्जस्यता मिलेको छ । ऊ भर्खर अरबबाट बलत्कृत भई, मानसिक रुपले विक्षिप्त भएर आएकी छे । उसलाई कुनै गैरसरकारी संस्थाले उद्धार गरेर नेपाल ल्याईदियो रे । ऊ अँध्यारा दिनहरूमा आशाको दियो बालेर विदेश गएकी थिई । तर उसलाई के थाहा विदेशमा यति भोका नरपिशाचहरूको यौनशिकार बन्नुपर्दछ भनेर । ऊ जीवन र मृत्युको दोसाँधमा पुगी रे । अन्त्यमा मर्नुभन्दा बौहुलाउनु निको भन्ने उखान लागु भयो रे उसलाई । उसको कथा हृदयविदारक छ । म उसको कथा सुन्दै छु । त्यहीबेला अर्को बलत्कृत पात्र पनि आइपुग्छे मभए ठाउँमा र भन्न थाल्छे - ' उसको कथा कथाभन्दा मेरो कथा हृदयविदारक छ । मेरो कथा लेखिदिनु' भन्छे । ऊ भन्छे- 'उसलाई छ विदेशमा विदेशीले बलात्कार गरेको छ । तर मलाई त मेरो आफ्नै देशमा आफ्नै दाजुभाईले बलात्कार गरेको छ । साम्प्रदायिक आगोको ज्वालामा उनीहरूले मेरो अस्तित्वलाई स्वाहा पारेका छन् । उनीहरूले को आफन्त को पर्राई, को बूढाबूढी को चेलीबेटी, केही भनेन भने विदेशीको त के कुरा गर्नु -' ती दुर्इ पात्रहरू आ-आफ्ना कथा महत्वपूर्ण भन्दै वादविवाद गर्न थाल्छन् । म उनीहरूको पीडादायक कथा सुनेर कथा लेख्न चाहन्छु र समाजलाई भावुक र सचेत गराउन चाहन्छु । तर अफसोच † उसको र मेरोबीच अवरोध आइपुग्छ । मेरी सानी छोरी 'भोक लाग्यो' भन्दै रुँदै आउँछे । म छोरीलर्ँइ खानेकुरा खुवाउन थाल्छु । त्यत्तिन्जेलसम्ममा मेरा पात्रहरू हिँडिसक्छन् । उनीहरू आफूलाई न्याय नभएको गुनासो गर्दै विद्रोहमा उत्रने चेतावनी दिँदै मबाट टाढा भाग्छन् । म उसलाई समाउन खोज्छु । तर असफल हुन्छु ।
म हरेस खादिनँ दिवाकार नेपालीज्यू, फुर्सद हुनुबित्तिकै अर्को पात्रको खोजीमा हिँड्छु । अहिले मसँग जनआन्दोलनमा उत्रेको एउटा घाइते राजनैतिक कार्यकर्ता छ । ऊ मेरो विरुद्धमा पनि आन्दोलनमा उत्रेको छ । किनभने धेरै लामोसमयदेखि उसले मलाई आप\_mनो कथा लेखिदिन अनुरोध गर्दै आएको थियो । ऊ देश र जनताको लागि लड्यो रे र्सवहारावर्गको लागि लड्यो रे । ऊ जनताको मौलिक अधिकारको लागि बाधझै गर्जन्थ्यो रे । लोकतन्त्रको स्थापनाको लागि ज्यान दिएर लड्यो रे । राजनीतिमा लाग्दा ऊ कहिले टाउको फुटाएर आउँथ्यो रे कहिले घरबाट महिना“ैदिनसम्म गायब हुन्थ्यो रे । त्यसैले ऊ परिवारको अगाडि भिजेको मुसो भएर बस्न बाध्य थियो रे । तर पनि उसले राजनैतिक विचारधारा परिवर्तन गरेन र । अहिले देशमा उसले गर्दा नै लोकतन्त्र आएको रे । तर उसँगै लडेका कार्यकर्ता कारमा कुद्न थाले रे । तर ऊ घरको सँधारमा कुद्न नसक्ने भएको छ । राज्यले उसलाई वास्ता गरेन रे । पार्टी कार्यकर्ता साथीहरूले पनि उसलाई वास्ता गरेन रे । म उक्त पात्रको मानसिकता बुझ्न गहिराइमा प्रबेश गर्छु उसलाई पढ्छु । उसलाई विश्लेषण गर्छु उसलाई उसको मागअनुसारको कथावस्तुमा ढाल्न शब्द र शैलीको समायोजन गर्न खोज्छु । त्यसैबेला भान्साकोठामा खाना तयार गर्नेबेला भएको सङ्केत पाउँछु । म झल्याँस्स हुँदै झ्यालबाहिर आँखा उघार्छु साँझले सँधारभित्र पाइला राखिसकेको पाउँछु । म अत्तालिन्छु । त्यसैसमय मेरो पात्र वैशाखीको साहाराले ढोकाबाट फुत्तबाहिर निस्कन्छ । म उसलाई समाउन चाहेर पनि समाउन सक्दिनँ किनभने मैले उसलाई समाएर मात्र हुँदैन उसलाई समय दिन पनि सक्नुपर्दछ । उसँग रमाउन सक्नुपर्दछ उसका भावाना बुझ्न सक्नुपर्दछ । तर यो सबकुराको कमी छ मसँग ।
म भान्साकोठाको कामतिर लाग्छु । म भान्साकोठामा काम गर्दागर्दै आमहडतालले बन्द भएको रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने एउटी केटीलाई उदास अनुहार लिएर चियापसलमा चिया खाइरहेको देख्छु । म उसैलाई समाउँछु । म उसको कथा सुन्दै काम गर्छु ऊ वादी केटी हो रे । उनीहरूलाई समाजले तल्लोस्तरको नागरिकको रुपमा राख्यो रे । उनीहरू शोषित र पीडित छन् रे । उनीहरू बषौदेखि यौनशोषित हुँदै आएकाले अहिले आक्रोशित र विद्रोही बनेका छन् रे । ऊचाहिँ अलिक टाढीबाठी भएकीले रेष्टुरेन्टमा काम गर्न थाली रे । तर के गर्नु बन्द र हडतालले रेष्टुरेन्ट पनि बन्द भएपछि उसलाई जीवन गुजार्न पनि गारो भइरहेको छ । आफ्नो अस्तित्व बेचेर कैयौँ भोका यौनपिचासुलाई सन्तुष्टि दिएर पनि बाँच्नका लागि उनीहरूले गर्नुपरेको सङ्धर्षअत्यन्त दर्दनाक भएकोले उसको कथालाई कथामा ढााल्न अनुरोध ऊ मलाई गर्छ झन अहिले बन्दले गर्दा ऊ राजनैतिक नेताहरूप्रति नै तीखो व्यङ्ग गर्छु आन्दोलनमा उत्रने खारो चे तावनी दिन्छे । अहिले ऊ झन बढी आन्दोलित र आक्रोशित देखिन्छे । ऊ मलाई आफ्नो सम्पूर्ण कथा सुनाउन चाहन्छे र त्यसको परिभाषा खोज्न चाहन्छे । म उसलाई उसको कथाको परिभाषा दिन सक्दिन र म छटपटाउँछु । त्यति नै बेला चुलामा तरकारी डढेको र दाल उम्लेर गएको आभास पाउँछु । म उक्त पात्रलाई सहनुभूतिका शब्द प्रकट गर्दै चाँडै उसको कथा प्रकाशित गरिदिने ढाडस दिँदै चुलोतिर लाग्छु । उसलाई दिएको वचनमा कतिको खरो उत्रन्छु त्यो मलाई थाहा छैन । किनभने मेरा पात्रहरू सङ्धर्षा उत्रनुको अर्कोर्र् प्रमुख कारण उनीहरूको कथा समयमा प्रकाशित नहुनु पनि हो ।
कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू, अब म पात्रको खोजी गर्दिनँ । किनभने पात्र खोज्दाखोज्दै म धेरै थाकिसकेको छु । एउटा पात्र धेरै समयदेखि मसँगै छ । उसले मलाई कथा लेख्न धेरै अनुरोध गरेको थियो तर मेरो जागिरे दायित्वले उसलाई कथामा ढाल्न सकेको थिइन“ । त्यो बेला देशमा जनयुध्द चलेको थियो । उसको कथा यस प्रकारको थियो । ऊ रङ्गेली बजारमा रिक्सा चलाई खाने मजदुर हो । धेरै दिनदेखिको नाकाबन्दीले उसले राम्रो आम्दानी गर्न सकेको थिएन । घरमा छोराछोरी भोकै र नाङ्गै थिए । ऊ रिक्सामा बिमारी लिएर विराटनगर हि“ड्यो । बाटामा पुलछेउमा बोरामा बालुवा भरेर राखिएका थिए । सबै यात्रु बम छ भनेर तर्केका थिए । तर मेरो पात्र साहसी बन्छ किनभने उसले घरमा चामल किनेर लानु छ, दाल र कपडा किनेर लानु छ । छोराछोरीको भोको पेटमा चारो भर्नु छ । उसलाई अहिले मान्छे भएर जन्मेकोमा दिक्क लागेको छ । ऊ चराचुरुङ्गी भएको भए सजिलै आहारा खोज्न सक्थ्यो । ऊ बिमारी टाढै राख्छ । आफू भने बोराको नजिक जान्छ । ऊ भोकले ग्रसित छोराछोरीको अनुहार सम्झन्छ अनि सयसयका हरिया नोट आ“खाअगाडि देख्छ । ऊ त्यहाँ बम छैन भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन्छ । ऊ बोरा उचाल्छ । बोरा उचालीनसक्दै उसको विश्वास पड्केर धेरै टाढासम्म छरिइसकेको हुन्छ । ऊ भन्दै छ- 'हम गरीब कथिले बिगारने छे - हमरा बेटाबेटी भुखले प्यासले कथिले नाङ्गै छे ,हमरा बेटाबेटी के कौन दोष छेलै छे - हम कथिले एनान सजाय पहिली - '
उसको कथा सुन्दासुन्दै उसँगै अर्को पात्र आइपुग्छ । ऊ राज्यद्वारा पीडित पात्र हो । उसको नाम हर्के हो । ऊ निदोर्षथियो रे । राज्यले छापामार र आतंककारीको बिल्ला लगाएर उसको ज्यान लियो रे । ऊ बूढा बाबु दलसिंहको एकमात्र सहारा, तरुणी स्वास्नी झिम्कीको आर्दश पति र छोरा लट्टेको आधारशिला थियो रे । उसलाई राज्यले मारेपछि आतंककारीको बिल्ला लगाईदियो रे । ऊ भन्दै छ -'माओवादीद्वारा राखिएको बोरामा बम छ भन्दाभन्दै रिक्शाचालक बोरा उचाल्न गएको थियो । ऊ नगएको भए ऊ मारिने नै थिएन तर मलाई त सैनिकले कुनै कारण नदेखाइ मेरा बाबुको अगाडि नै मलाई गोली हानेका थिए । त्यसैले मेरो कथा बढी महत्वपूर्ण छ' ऊ भन्दछ । हुन पनि देशमा चलेको एक दशकको जनयुद्धमा धेरै निदोर्षजनता मारिएका थिए । अब ती दुर्इमा वादविवाद चल्छ । म सम्झौता गराउनपटि्ट लाग्छु । म हर्केलाई भन्छु -'तिम्रो कथा त कथाकार पुण्यप्रसादले लेखिदिएका छँदै छन् नि । विचरो † त्यो रिक्शाचालकको कथा कसले लेखिदिन्छ - ऊ मलाई चुनौति दिँदै भन्छ - त्यसो भए पक्कै रिक्शाचालकको कथा लेखिदिनु हुन्छ त - म उसलाई लेखिदिने वाचा गर्दछु ।
भोलिबिहानको सूर्योदयको पहिलो झुल्कोमा नै उसको कथा लेख्ने सङ्ंकल्प गरेर म निदाउँछु ।
बिहान उज्यालो हुँदा नहुँदा मेरो घरको उषाकालीन दायित्व मसँगै ब्यूँझन्छ । उक्त पात्रको विश्वास बटुल्न धेरै चोटि कलम र कापी लिएर बस्ने जमर्को गर्छु तर असफल हुन्छु । असफलताको झटारो खाँदाखाँदै मेरो अफिस जाने समय भइसक्छ । कुनै फुर्सदको समय पारेर कथा लेखिदिने प्रतिज्ञा गरेर म अफिस जान्छु । तर म सोच्छु यो कथा त बासी भइसकेको छ । देशमा विद्रोहीपक्षले युद्ध त्यागेर शान्ति सम्झौतामा फर्किसकेको छ । त्यसैले उक्त रिक्शाचालकको कथा कसले पढीदिन्छ । त्यसैले म उक्त पात्रको कथा लेख्ने मन गर्दिन । अनि फेरि म उक्त पात्रबाट टाढिन्छु अनि अविश्वासी र असक्षमीको उपाधि पाउ“छु ।
अब म पात्र खोज्न सक्तिनँ - दिवाकार नेपालीज्यू । म धेरै थाकिसकेको छु । म पात्रहरूसँग शान्तिवार्ता गर्न चाहन्छु । सरकारले विभिन्न आन्दोलित वर्ग, समुदाय, र जातहरूसँग शान्तिवार्ता गर्न चाहेझैँ म पनि शान्ति वार्ता गर्न चाहन्छु तर मभित्र अहम् र हुँकार छ । जसले गर्दा म तिनीहरूको अगाडि झुक्न सक्तिनँ । किनभने म उनीहरू बिना पनि बाँच्न सक्छु भन्ने घमन्ड ममा छ । त्यसैले पात्र र मबीच खाडलको गहिराइ बढ्दै गएको हो । मेरा पात्रका कुण्ठित भावनालाई मैले नस्वीकार्नुले मलाई मात्र हैन पात्र स्वयम्लाई र धेरै पाठकहरूलाई हानि गरिरहेको छ । पाठकहरूलाई पनि राम्ररी थाहा छ, उनीहरूलाई म ढाट्न सक्तिनँ किनभने उनीहरूले मलाई राम्ररी पढिरहेका छन् । त्यसैले हामीबीच मध्यस्थता कायम गर्न तपार्इँ साँघु भएर आउनुपर्छ । मेरा आन्दोलित पात्रहरूसँग शान्ति सम्झौता गराउन तपाईँ मात्र सक्नुहुन्छ दिवाकर नेपालीज्यू यदि तपाईँ आउनुहुन्छ भने, मेरा कथाहरूको क्यानभासमा चाँडै सम्झौताको क्यानभास तयार हुनसक्छ ।
2:55 AM कथा
(यो कथा कथोपन्यास 'क्यानभासमा कथाहरू'को एउटा श्रृङ्खला हो । कथाकार अनामिकाको अचानक कथाकार दिवाकर नेपालीसँग 'समयको क्यानभासमा' कथामा भेट भएपछि जन्मिएका कथाहरू हुन् यी । त्यसैले यस कथामा कथाकार दिवाकर नेपालीलाई सम्बोधन गरिएको छ । -लेखिका )
'कथाकार अनामिकाज्यू हुनुहुन्छ ?'
'बोल्दै छु, तपाईको बोल्दै हुनुहुन्छ ? '
'म तिम्रो नजिकको मान्छे हुँ । चिन्ने प्रयास गर '
'कृपया आफ्नो छोटो परिचय दिनुहोला । '
'चिन्ने प्रयास गर न । पन्ध्र वर्षघि हामी क्याम्पसमा सँगै पढ्थ्यौ नि ! '
'ओहो ! क्याम्पसमा त कतिसँग पढियो पढियो । महाशयको नाम भन्ने कष्ट गरिदिनुहोला । नत्र म फोन राखिदिन्छु ! '
'लौ यसरी किन रिसाएकी ! तिमीले रिसाउन पनि जानेछ्यौ हैन ? धेरै खुसी लाग्यो । तिम्रा कथाहरूको एउटा फ्यान हुँ म ।
'फ्यान त धेरै हुन्छन् । तर यसरी दिमाग चाटिरहनुको अर्थ बेग्लै हुन्छ । '
'तिम्रोसफल जीवनका लागि मेरो हार्दिक बधाई मलाई भेट्न चाहन्नौ ? '
'पहिला यो त भन्नुहोस् महाशय तपाईँ को बोल्दै हुनुहुन्छ ? नत्र म फोन राखिदिऊ ? '
'भैगो... भैगो फोन राख्नु पर्दैन । मेरो नाम सुनेर नतर्सनु नि ! म सुधांसु हुँ ।'
'ओहो ! सुधासु तिमी कहाँ छ्यौ ? के गर्दै छौ ? अचानक यो खैखवरी कहाँबाट आयो ? '
'यति धेरै प्रश्नको लागि त भेट्नै पर्छ ।'
'तर म भेट्न सक्दिनँ । मेरो आफ्नै संसार छ । फेरि मैले तिम्रोर मेरो प्रेमको कथा स्मृतिको क्यानभासमा र्सार्वजनिक गरिसकेँ । कतै तिम्रोमन फर्केर मेरो र्स्वर्गजस्तो संसार भताभु भयो भने । '
'मलाई अझै विश्वास गर्दिनौ ? '
'विश्वास गर्न बलियो आधार चाहिन्छ । त्यो आधार तिमीले भत्कायौ ।' 'तिमीले मलाई फोन गर्छभनेर फोन नगरी किन लाछीपन देखायौ ?'
'मैले लाछीपन नदेखाएको भए अहिले तिमी चर्चित साहित्यकार हुन्थ्यौ र ? '
'भैगो तिमीले एकपल्ट पनि फर्केर मलाई के गर्दै छौ भनेनौ तर मेरो भाग्यले मलाई भनेजस्तो श्रीमान र घर दियो । '
'तिमी सुखी छौ हैन ? '
'दुखी छु भनेर तिमीलाई सुनाएर मलाई के फाइदा हुन्छ ? '
'तिमी मलाई भेट दिन्नौ, केही समयको लागि मात्र तिम्रोसौर्न्दर्य कस्तो छ ? '' पहिलाको जस्तो छ कि बिगार्यौ ? '
'अब हाम्रो बाटो फरकफरक भइसक्यो । तिमी आफ्नो संसारमा छौ म आफ्नो संसारमा छु । भेटेर के फाइदा ? '
'तिमी त खाली फाइदा र घाटाको मात्र कुरा गछ्र्यौ । जे होश बिजनेशमेनको श्रीमती नै पर्यौ ! '
'तिमीचाहिँ के गर्दै छौ ? भाल्टाङ्गभुल्टुङ्ग कति भए ? '
'बेगारी छु त्यसैले अहिलेसम्म एउटीले पनि पत्याएनन् ।
'म पत्याएकीलाई फेरि किन फोन गरेनौ ? भागेर कलकत्ता जाने भनी सल्लाह गर्यौ अनि फोन गर्छुभनेर नगरी हाम्रो प्रेमकथा टुङ्ग्याइदियौ हैन ।'
'मैले फोन गरको थिएँ । तर तिम्री काकीआमाले मलाई के भनिन थाहा छ ? तिम्रोबिहेको कुरा छिनिसकेको छ । र तिमी मसँग बोल्न पनि चाहँदैनौ भनेर ।
'तिमीले कसरी विश्वास गर्यौ यो कुरालाई ? '
'त्रि्री काकीकी छोरीले मलाई तिम्रोनामको पत्र ल्याएर दिएकी थिई । मैले सोचे वास्तवमा नै तिमी मसगँ बिहे गर्न तयार छैनौ । किनकी हाम्रो जात पनि मिल्दैन । '
'मैले तिम्रोबाटो हेरेर दिन बिताएँ । तिमी घोखेवाज रहेछौ भनेर तिमीप्रति धृणा उब्जाएर बाचेँ । '
'त्यसैले त तिम्रोदाम्पत्य जीवन सफल भयो । तर तिमीले कथामा त आफैले मलाई छोडको, मैले धोका दिएको कुरा त लेखेकी थिएनौ नि त
'ए ! त्यो त मैले आफूलाई महानता देखाउन त्यसो भनेकी थिएँ । म नेपाली समाजको नारी हुँ मैले आफ्नो सामाजिक बचाव पनि त गर्नैपर्छ । जे भयो भयौ अब बितेका कुराले किन चिन्तित बन्नु तिमीले बिहे गर्यौ त ? '
'अघि नै भनिसके नि तिमीजस्ती सुन्दरी कतै भेटिनँ । भेटिएकाले पनि पत्याएनन् । '
'त्यसो भए तिमीसँग नभेट्नु नै उचित हुन्छ । किनभने मेरो श्रीमान शंकालु हुनुहुन्छ फेरि तिमीसँगको प्रेमप्रसङ्ग मैले मेरो कथा 'स्मृतिको क्यानभासमा' मा सार्वजनिक गरिसकेकी छु । '
'फेरि कथा सच्याएर बनाऊ न । तिमी कथाकारहरू पात्रलाई वास्तविक बनाउन पनि सक्छौ र यो बनावटी हो भन्न पनि सक्छौ । एउटा वाक्यले सारा कथा नै बदलिदिन सक्छौ । '
'यो कसरी सम्भव हुनसक्छ ? मैले वास्वविक हो भनेर र्सार्वजनिक गरिसक़ेँ । यो असम्भव छ । '
'अब मसँग अहिले भेट भएको कथाचाहिँ र्सार्वजनिक नगर्नु अनि कसले थाहा पाउँछ । '
'होइन तिमीलाई चिन्ने कोहीले सुनाइदियो भने नि त । '
'कसरी चिन्छन् म जम्मा चारपटक मात्र यो ठाउँमा आएको छु । '
'भैगो आज मेरो वर्कशप छ । काठमाडौबाट प्रशिक्षक आउँदै छन् । उसलाई स्वागत गर्नछु मलाई हतारो छ । फोन राखू है । '
'एकचाटि भेट दिन्नौ ? '
'अहिले मलाई हतार छ । '
'अनि छोराछोरी कत्रा छ नि ? '
'छोरी सात कक्षामा पढ्छे र छोरा चारमा । '
'कति सुखी परिवार रहेछ । '
'हो परिवार सुखी , म दुखी । '
'कसरी ? '
'तिमीजस्ती घरवारविहीन को साथी सुखी हुन्छे त ? '
'मेरो कारण किन दुखी बन्छौ भेट दिन नचाहनेले ? '
'मेरो बारेमा र फोन नम्बरचाहिँ कसरी थाहा पायौ ? '
'यत्रो चर्चित कथाकारको ठेगाना फोन नम्बर एउटा सिरियस फ्यानलाई थाहा हुँदैन र ? तिम्रोबारेमा मलाई सब थाहा छ । तिमीले साहित्य र परिवार दुर्इमा एउटा रोज्नुपरे कसलाई रोज्छ्यौ ? '
'त्यो अति कठिन प्रश्न छ । मलाई परीक्षा नलेऊ । म भर्खर लेख्न थालेकी मान्छे । त्यस्तो चर्चित कहाँ बनेकी छु र ? '
'तर पनि तिम्रा कथाहरू राष्ट्रियस्तरका पत्रिकामा आउँछन् नि त । '
'हो केही प्रयास अवश्य गर्दै छु । तर जिम्मेवारी धेरै छ । अफिसियल दायित्व, पारिवारिक कर्तव्यले लेख्न धेरै गारो हुन्छ ।'
'तर पनि लेख्दै छौ । तिम्रोबारेमा हाम्रो समूहमा चर्चा हुन्छ ।'
'कस्तो चर्चा ? कस्तो समूह ? '
'उही साहित्यिक समूह । '
'तिमी पनि साहित्यमा लागेका छौ ?मलाई त थाहा नै थिएन । '
'हो र होइन पनि म अनुवाद मात्र गर्छु'
'त्यसो हो भने तिमीसँग भेट्नै पर्छ ।'
'ओहो अहिलेचाहिँ आइशब्रेक भयो होइन ? '
'लौ भन, मेरो कथा अनुवाद गर्र्छौ होइन ?'
'त्यो त गर्छु तर भेट दिनुपर्यो नि त ।'
'भेट्ने कुरा नगर म तिमीलाई तिम्रोपोष्टबक्समा पठाइदिन्छु । '
'भैगो नभेटी राख्न गारो हुन्छ । हाम्रो यो विदेशी प्रोजेक्ट हो । '
'कहिले भेट्ने ? '
'आज ? '
'आज मेरो वर्कशप छ नगई हुन्न । वर्कशपमा प्रशिक्षकलाई स्वागत गर्नुछ ।'
'त्यो वर्कशपको प्रशिक्षक को छ, थाहा छ ? '
'थाहा छैन काठमाडौबाट विशेषज्ञ आउने कुरा छ लाइब्रेरियन सम्बन्धी तालिम दिने । '
'त्यो प्रशिक्षक म नै हुँ । अब मलाई भेट्छौ कि भेट्दैनौ ? '
'अहो कस्तो धर्मसंकट अघि नै तिमीले यो कुरा भनेका भए हुने नि अब म के गरु ? '
'तिम्रोविचार । '
'सुधांसु तिमी नै भन अब म के गरुँ तिमीलाई भेटुँ कि नभेटँु ? '
'यो कथालाई म कसरी र्सार्वजनिक गरुँ ? कथाकारहरू आफ्नै कथामा कसरी जेलिदा रहेछन् । तिमी सल्लाह देऊ न । '
'यसो गर यहाँसम्मको कथा लेख । त्यसपछि भेट भयो भएन त्यो चाहिँ नलेख । '
'तिम्रोसल्लाह पनि ठीकै हो तर यहाँसम्मको कुराले भेट भएकै ठानिनेछ । म के गरुँ सुधांसु तिमी नै भनन । '
'तिम्रोवरिष्ठ कथाकार हुनुहुन्छ नि उहाँसँगै सल्लाह मागेर त्यही अनुसार गर ।'
'ओके तिमीले राम्रो सुझाव दियौ ।'
कथाकार दिवाकर नेपालीज्यू, एकदिन अचानक सुधांसुले फोन गरेपछि यो कथा जन्मेको हो । म कस्तो धर्मसंकटमा परे । मैले सुधासुलाई नभेटी पनि भएन किनभने त्यो वर्कशपमा मैले भाग लिनैपथ्र्यो । फेरि उसँग भेटभएको कथा पनि र्सार्वजनिक गर्न सक्दिन“ । तपाईँ नै मलाई उचित सल्लाह दिनुहोस् म सुधासुसँग भेटेको कथा र्सार्वजनिक गरुँ कि नगरुँ ?